ဝိဇ္ဇာ – The Voice Journal
Trump – Kim ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ ဘာတွေဖြစ်သလဲ ဘယ်ကိုသွားမလဲ
စင်ကာပူတွင် အမေရိကန်သမ္မတ Trump နှင့် မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် Kim တို့ သမိုင်းဝင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ၏ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ဗီယက်နမ်တွင် ဒုတိယအကြိမ် ထိပ်သီးတွေ့ကြသည်။ ဆွေးနွေးအပြီး သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးရန် စားပွဲအဆင်သင့်ပြင်ထားသော်လည်း သဘောထားကွဲလွဲကာ ဆွေးနွေးပွဲ ရုတ်တရက်ရပ်လိုက်ရသည်။ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်...
ထိုင်းဘုရင့်ညီမ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်းရဲ့ နောက်
ထိုင်းဘုရင် မဟာဗာဂျီယာလောင်ကွန်၏ ညီမတော်သူ ထိုင်းမင်းသမီး ဥဘောရတနာ ရာဇကညာသည် မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝန်ကြီးချုပ်လောင်းအဖြစ် ဝင်ပြိုင်ရန် စာရင်းသွင်းလိုက်သောကြောင့် နဂိုကတည်းက မငြိမ်မသက် ဖြစ်နေသည့် မုန်တိုင်းဝင်မွှေတော့မည်လား။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၁၉၃၂ တွင်...
မြန်မာ့အိမ်နီးချင်းများ၏ ၂၀၁၉ ကံကြမ္မာ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသည် မြန်မာ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြခံရမှု နည်းပါးသော်လည်း ၂၀၁၇ ဖြစ်ရပ်နောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရေးကြီး အိမ်နီးချင်းစာရင်းဝင်သွားပြီ ဖြစ်သည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု ဆုတ်ယုတ်မှုများသည် ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့်တကွ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတို့အပေါ် များစွာသက်ရောက်သည်။...
Articles / Articles / Foreign Affairs / Foreign Affairs / lotaya
နေရာက ကနေဒါနိုင်ငံ ဗန်ကူးဗားမြို့။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ ဒသမ ၂ သန်းတန်သော စံအိမ်ကြီးတွင်းမှ ထွက်လာပြီး GPS နေရာပြ ခြေကျင်းဝတ်ဆင်ထားလျက် ယာဉ်မောင်းပါ SUV ကားနက်ပေါ်သို့ တက်ရောက်သွားသူမှာ ကနေဒါတွင် အမှုရင်ဆိုင်နေရပြီး အာမခံရသွားသည့်...
၁၉ နှစ်မပြည့်လျှင် စင်ကာပူတွင် ဆေးလိပ်မသောက်ရ
စင်ကာပူတွင် ဆေးလိပ်သောက်သုံးနိုင်သည့် အနိမ့်ဆုံးအသက် Minimum Smoking Age ကို ၁၉ နှစ်သို့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်သည်။ နဂို ၁၈ နှစ်မှ ၁၉ နှစ်သို့ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ စင်ကာပူ၏ နာမည်ကျော်...
တရုတ်နိုင်ငံတွင်သာမက ကမ္ဘာတွင် အင်အားကြီးနည်းပညာကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် တရုတ် Huawei ကုမ္ပဏီ၏ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် CFO Chief Financial Officer ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ် Meng သည် ကနေဒါလေဆိပ်တွင် အဖမ်းခံရပြီး ၁၀ ရက်အကြာတွင် ပြန်လွတ်လာသည်။ အာမခံဖြင့်...
မြန်မာပိုးလမ်းမသစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်အကောင်အထည်ဖော်မည်
ပိုးလမ်းမသစ်စီမံကိန်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံရုံး၏ Facebook စာမျက်နှာပေါ်တွင် တင်လိုက်သည့် Post တစ်ခုက ဖော်ပြလိုက်ရာ ပိုးလမ်းမသစ်စီမံကိန်းကို ဂရုတစိုက် အကောင်အထည်ဖော်မည့်လက္ခဏာ ဖြစ်သည်။ ‘နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ထမ်းဆောင်ပြီး...
Articles / Foreign Affairs / Politics
စင်ကာ 4G အိမ်ရှေ့စံ ဘယ်သူလဲ
တစ်ချိန်ချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံကျော်တက်လိုသည့် စင်ကာပူမြို့နိုင်ငံတွင် ဝန်ကြီးချုပ်လီရှန်လွန်းနေရာဆက်ခံမည့် အိမ်ရှေ့စံတင်မြှောက်လိုက်ပါပြီ။ မြန်မာတို့နှင့် ရောယှက်ပတ်သက်နေသည့် စင်ကာပူ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားအများအပြား ပညာသင်အလုပ်လုပ်နေထိုင်ကြသည့် စင်ကာပူ၏ အိမ်ရှေ့စံကား လက်ရှိဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Heng Swee Keat ဖြစ်သည်။ သူသည် လီရှန်လွန်းအနားယူပါက စင်ကာပူတည်ထောင်ပြီးသည့်နောက်...
အာရှနှင့် ကမ္ဘာတွင် စီးပွားရေးအင်အားကြီးဂျပန်သည် နောင် ၁၀ နှစ်ကျော်အကြာ ၂၀၃၀ တွင် လုပ်သားလိုအပ်ချက် ၆ ဒသမ ၄ သန်းရှိမည်ဟု Chuo တက္ကသိုလ်နှင့် Persol သုတေသနနှင့် အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီတို့က ထုတ်ပြန်သော သုတေသနစစ်တမ်းတွင်...
သည်လိုပုံနှင့် မိုးကြီးချုပ်လျှင် …
IS အကြမ်းဖက်နှင့် ဆက်စပ်သူနှစ်ဦး အင်ဒိုနီးရှားလုံခြုံရေးဝန်ကြီးကို ဓားဖြင့်ထိုး
ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျမှုကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်သေဆုံးမှု မြင့်တက်ဟုဆို
လွိုင်ကော်အနီးတစ်ဝိုက် ကျေးရွာများတွင် စပ်ဆေးများရောင်းချဟုဆို
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် ဆောင်းသီးနှံအတွက် ကျပ် ၄၀၀ ဘီလီယံကျော် ထုတ်ချေးမည်